Ulo elu igwe na-enwu n'ụlọ
Ụlọ Imepụta Imepụta
Oghere ụlọ elu nke ụlọ maka ụlọ dị ọhụrụ, nke oge a, na-eri obere ike, ụdị ọkụ ọkụ. Ogwe ọkụ eletrik adịghị esiri ike ịgbakọta, a na-ama ha site na nchedo, nwee ogologo ndụ ọrụ, ihe ọkụkụ dị elu, ha enweghị mmetụta flickr.
Ogwe ọkụ eletrik dị na mbara igwe nwere ike ịdị iche na agba na ogo, ike, ọrụ - ọ na-enye aka ịmepụta ihe mgbaàmà dị ịtụnanya, na-enyere ndị ọzọ aka imepụta ime. N'inwu ọkụ, ọtụtụ ọkụ , njuputa zuru ezu nke ụlọ ahụ, ejiji ogo 180 na-agbasasị ìhè.
Ụdị ụdị ọkụ eletrik ma were ọnọdụ
Ogidi ụlọ elu nke ọkụ bụ ihe ọkụkụ dị iche iche na-adịgasị iche n'otù ha si agbago: ha na-ewu na-aga n'ihu.
A na-agbanye oghere ndị e ji rụọ ọrụ n'ime akwa ụlọ a na-etinye na plastaboard, plastik ma ọ bụ na-agbatị ala, nke a na-emezi site n'eziokwu na ha enweghị ike ikpo ọkụ.
A na-eji oghere elu mee ihe n'ọnọdụ ebe ọ na-enweghị ike ime oghere n'elu ụlọ, ntinye ha gụnyere n'eziokwu na a na-ebugharị ígwè ígwè ahụ, a na-etinyekwa ihe mkpuchi ya.
Ọ na-adaba adaba iji ogwe aka rụọ ebe ị ga-achọ ịmalite ịmegharị akụkụ ma ọ bụ mee ka olu kwuo, gosipụta ihe ime. Ihe ọzọ dị iche iche bụ na enwere ike iji ha na ụlọ ebe ọ na-ata mmiri mmiri, dịka ọmụmaatụ, n'ime ime ụlọ ịwụ, ma ọ bụ na mmiri, dịka ọmụmaatụ, na ọdọ mmiri. Nke a ga-ekwe omume n'ihi eziokwu ahụ na ha enweghị ịchọrọ ma ọ bụ gas na-abaghị uru, ha na-egbuke egbuke, ha nwere nchebe dị elu.
Ulo elu ulo nwere ike inwe ụdị dị iche iche: ha dị gburugburu, square na akụkụ anọ. Ngwunye nke ọdịdị kachasị mfe na-adị mfe n'ime ụdị ọ bụla nke ụlọ ahụ ma jikọta ya na kpochapụwo na ụdị ultraodern nke chandeliers na ndị ọzọ ọkụ ọkụ.
Otu n'ime ihe ndabara nke ụdị ihe ndị a bụ ọnụahịa ha dị elu, ọbụna obere ngwa ngwa nke dị obere dị oke ọnụ. Ọzọkwa, oghere ndị na-awụpụ ọkụ na-achọ ebe siri ike, nke a na-enweghị ike igbochi ya, n'ihi nke a, ha kwesịrị iji ihe ndozi na-emepụta ihe.
Ụlọ na GKL
Dina na isi ala
Nbudata ihe ntanye
Ihe nkwụnye maka akwa uwe
Window windo na aka ya
Ezie mgbidi na akwụkwọ ahụaja abụọ agba
Igbe maka kichin
Uwe ala na-enweghị ntụpọ
Na-enwu n'ime ime ụlọ
Ogwe ndị a na-eji akwa akwa
Kedu ka esi eme ka ndị Czechoslovakia mma maka ọrụ ụtụtụ?
Kedu ihe ị ga-eyi uwe na-acha aja aja?
Uche maka umu n'ulo
Dakota Fanning na Jamie Strachan
Na ihe na-eyi akwa akpụkpọ ụkwụ - nhọrọ nke foto nke ihe oyiyi kachasị elu na akpụkpọ ụkwụ
Kedu ụdị ọgwụ mgbochi dị n'ime ime?
Kedu esi eweghachi di ya n'aka nna ya ukwu?
Na-asa efere n'okpuru sink
Ụbọchị onyinye maka nne di
Kedu ka osisi dollar si acha?
Nutrition for pulmonary tuberculosis
Nrọ si eche
Leonardo DiCaprio mere ememe Krismas na ezinụlọ ezigbo enyi ya
Ose na mmanụ aṅụ
X-ray ihe ntanye X-ray
Ewube ụlọ elu ụlọ
Leonardo DiCaprio mere Ememme Ọhụrụ na-enweghị Kelly Rohrbach
Karkade tii - uru bara uru
Omume cognition nke ụwa gbara gburugburu
Olee otú akụ kabeeji na seedlings?
Kedu otu esi ahọrọ akwa atụrụ maka oyi?
Ejiri ikpere ikpere